रेकर्ड बनाएको छक्का पन्जालाई दर्शकको चर्काे गाली !::Radio Chhahari
रेकर्ड बनाएको छक्का पन्जालाई दर्शकको चर्काे गाली !
काठमाडौं – दीपाश्री निरौंला निर्देशित चलचित्र ‘छक्का पन्जा’लाई दर्शकले चर्काे गाली दिइरहेका छन् । स्वदेश प्रदर्शनबाट बिगत केही बर्षयताकै सर्वाधिक ब्यवसाय गर्न सफल ‘छक्का पन्जा’ले यु–ट्युवमा आए लगतै दर्शकबाट चर्काे आलोचना र गाली पाउन थालेको हो ।
यु–ट्युवमा चलचित्र हेर्ने दर्शक कतिले ‘छक्का पन्जा’लाई हावादारी चलचित्र भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्, भने कतिपयले हावाकै भरमा चलचित्रले ब्यवसाय गरेको लेखेका छन् । केही दर्शकले त ‘छक्का पन्जा’ जस्तो हावादारी चलचित्र बनाएर जनता ठग्ने काम गरेको आरोप लगाउन समेत पछि परेका छैनन् ।
दिपकराज गिरी, प्रियंका कार्की, केदार घिमिरे, शिवहरी पौड्याल, जितु नेपाल, बर्षा राउत, नम्रता सापकोटा लगायतको अभिनय रहेको ‘छक्का पन्जा’मा नाम कमाएका कलाकार जोडिनु नेपाली कलाकारीताको लागि दुखद रहेको समेत केही दर्शकले प्रतिक्रियामा लेखेका छन् ।
चलचित्र महिला निर्देशकले बनाएकी हुन् । महिला निर्देशकले बनाएको चलचित्र भएपनि नारीलाई पोजेटिभ भुमिकामा प्रस्तुत गर्न नसकेको केही दर्शकको आरोप छ । उनीहरुले यसलाई नारी अधिकारबादीले मुद्दाको रुपमा आगाडि ल्याउनु पर्ने समेत प्रतिक्रियामा लेखेका छन् । चलचित्र मिडियाको हावाले हिट भएको भन्ने पनि यु ट्युवमा कम देखिएनन् ।
प्रतिक्रिया धेरैले चलचित्रको कथाबस्तु र सन्देशका बिषयमा असन्तुस्टी व्यक्त गरिरहेका छन् ।
हुन त स्वदेश तथा बिदेशका दर्शकको बहुप्रतिक्षित सुचिमा रहन सफल यो चलचित्र बिदेशका धेरै भु–भागमा प्रदर्शनको मितितय हुँदै गर्दा पाइरेसी भएपछि यु–ट्युवमा ल्याइएको हो ।
चलचित्रको पाइरेसीमा संलग्न नवलपरासी कावासोती घर भएका कृष्ण सुवेदीले कानुनी कारबाहिको डरमा हतोत्साहित हुँदै आत्महत्या समेत गरिसकेका छन् ।
चलचित्र पाइरेसी भएलगतै डिजिटल अधिकार प्राप्त हाईलाईट्सले विजनेसमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै यसलाई युट्युवमा ल्याएको हो ।
यु–ट्युमा पनि चलचित्रले एक सातामा ४१ लाख भन्दा बढी दर्शक पाएको छ । नेपाली चलचित्रले यु ट्युवमा थोरै समयमा यति धेरै दर्शक पाएको सम्भवत यो पहिलो हो ।
बक्स अफिस र यु ट्युवमा समेत रेकर्ड बनाउन सफल चलचित्रलाई धेरै दर्शकको एउटै प्रश्न छ । यस्तो चलचित्रले कसरी १०० दिन मनाउन सफल भयो ?